एसडिएफको आइडियोलजी भनेकै भिक्टिमाइज गर राज गर हो- गोले - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारएसडिएफको आइडियोलजी भनेकै भिक्टिमाइज गर राज गर हो- गोले
२०१४ को चुनाउमा भारीमतले जिताउने पश्चिम सिक्किममा बिकास खोई? पूर्व जिल्लाको बिकास सबै पश्चिम जिल्लामा खन्याउछु भन्ने मुख्यमन्त्रीको बिकास पश्चिममा खोई ? बाटो घाटो अनि सबै क्षेत्रमा पश्चिम सिक्किमलाई एसडीएफ सरकारले हेला गरेको छ। अब पश्चिमको जनता जाग्नु पर्छ।’
गेजिङ, 14 सेप्टेम्बर
सिक्किममा मन्त्रीका घरहरू एकै वर्षमा बनिन्छन् तर पाठशाला र कलेजहरू १० बर्षमा पनि बनिँदैन
एसकेएम पार्टीका अध्यक्ष पीएस गोलेको भ्रमणको दोस्रो दिन टासीडिङ – याकसुम समष्टिको मिडल गेरेथाङ, अरिथाङ, चोङ्गराङ्ग र टासिडिङका जनताहरूसँग भेटघाट र अन्तरक्रिया गऱ्यो। गोलेले आफ्नो सम्बोधनमा आफूहरूले हतास भएर कहिल्यै मैदान नछोडेको बताए।
‘अहिले हामीले उम्मेदवार दिएका छैनौं। अहिलेलाई हाम्रो चुनाउ चिह्न भनेको टेबल ल्याम्प हो। चुनावमा उम्मेदवार जनताले चयन गर्नेछन्। हामीलाई एकपल्ट मौका दिनु होस्। काम गर्नु नसके हामीलाई पाँच बर्षबाद छुट्टि दिनु होस्,’ गोलेले अन्तरक्रियामा भने।
सरकारको उदासीन नीतिको कारण विद्यार्थीहरू ड्रापआउट भइरहेको, याकसुम पाठशालामा शिक्षकहरू तदर्थ रहेको र आफूहरूले परिवर्तन चाहेको भन्दै विद्यार्थीहरूले आफ्ना कुरा राखे। ‘२५ बर्षको सरकारमा संस्कृति क्षेत्रमा हामीलाई कुनै मौका दिइएन,’ उनीहरूले गोलेसित भने, ‘सिक्किमका पाठशालाहरूमा न त लाइब्रेरी छ, न त ल्याब। मन्त्रीका घरहरू एकै वर्षमा बनिन्छन् तर पाठशाला र कलेजहरू १० बर्षमा पनि बनिँदैन।’
गोलेसित विद्यार्थीहरूले धेरै गुनासो पोखे। गोलेले सबैलाई आश्वासन दिँदै आफ्नो सरकार बनेपछि पहिलो प्राथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिने बताए।
भिक्टिमाइज गर राज गर
‘ २०१८ मा विद्यार्थीहरूलाई ल्यापटप चुनाउलाई हेरेर मात्र सरकारले बाँड्यो। सिक्किममा जस्तो धनीको नानीहरूले शिक्षा पाउँछ त्यस्तै गरीबको नानीहरूले पनि शिक्षा पाउनुपर्छ। एसकेएम पार्टी हारलाई सिँड़ी बनाएर जितको पक्षमा जाँदैछ,’ गोलेले भने, ‘ एसडीएफ पार्टी भनेको दुई चार जना शोषक र सामन्तीहरूले चलाएको पार्टी हो। २४ बर्ष यिनीहरूले ढलिमली गरिरहेका छन्। भिक्टिमाइज एसडिएफको आइडियोलजी हो। भिक्टिमाइज गर राज गर।’
उनले एसकेएम सरकारले याकसम टासिडिङ समष्टिबाटै काम शुरू गर्ने बताउँदै एसडीएफ सरकारले गाई बस्तु पाल्ने जङ्गल र अलैंचीबरी सबै बन्द गरेर गरीबलाई अन्याय गरेको पनि बताए। ‘ हाम्रो सरकारमा बन जङ्गल खोल्नेछौं र अलैंचीबारी फेरि खोलेर जनतालाई दिनेछौं,’ उनले भने, ‘२४ बर्षमा एसडिएफले जनतालाई कङ्गागाल बनायो। बोन्साई बनाएर राख्यो।’
उनले इ – टेन्डर प्रथा बन्द गर्ने, जुन ठाउँको काम हुन्छ त्यही ठाउँका मानिसलाई काम दिने कानुन बनाउने, हेलित जिल्ला पश्चिम रहेको र सिक्किममा नै अन्यायमा परेको र पछौटे समष्टि याकसुम – टासिडिङ समष्टि रहेको बताए।
‘लिम्बु तामाङ समुदायले सीट पाउन एसडीएफ सरकारलाई फ्याँक्नु पर्छ। २०१४ को चुनाउमा भारीमतले जिताउने पश्चिम सिक्किममा बिकास खोई? पूर्व जिल्लाको बिकास सबै पश्चिम जिल्लामा खन्याउछु भन्ने मुख्यमन्त्रीको बिकास पश्चिममा खोई ?,’ उनले भने, ‘ बाटो घाटो अनि सबै क्षेत्रमा पश्चिम सिक्किमलाई एसडीएफ सरकारले हेला गरेको छ। अब पश्चिमको जनता जाग्नु पर्छ।’
एसडीएफ पार्टीलाई त्याग गर्दै एसडीएफ पार्टीको पूर्व पञ्चायत सनमाया सुब्बा मिडल गेरेथाङ अनि लीलाहाङ्ग सुब्बा एसडीएफ पार्टीको वार्ड प्रेसिडेन्टटको अगुवाईमा जम्मा ४० परिवार अनि लोवर लबिङको २१ परिवार, उप्पर लबिङबाट १३ परिवार, लोवर अरिथाङ वार्डबाट ३४ परिवार एसडीएफ पार्टीलाई त्याग गर्दै जम्मा १०८ परिवार एसकेएम पार्टीमा बिधिवत रूपमा सामेल भए। उनीहरूलाई गोलेले खादा अर्पण गर्दै पार्टीमा सामेल गराए।